လုးံချင်း အိမ် ရောင်းရန်ရှိသည်
(သင်္ဃန်းကျွန်း) မြို့နယ်တွင်ရှိသော(70×80) ft /( 5600 ) sqft အကျယ်ပါရှိလုံးချင်း...
ရောင်းရန် - မီနီကွန်ဒို - အလုံ
ကမ်းနားလမ်း အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုမီနီယံအလုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော(2950) sqft အကျယ်ပါရှိcondoရောင်းမ...
ရောင်းရန် - လုံးချင်းအိမ် - ရွှေပြည်သာ
ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်တွင် အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည...
vip ၃ ရပ်​ကွက်​ . အမှတ်​ ၄ လမ်းမကြီးအနီး​ ​တော်​ဝင်​လမ်းသွယ်​ ၄ ရွှေပြည်သာ မြို...
( ပြည်လမ်းနှင့် အင်းစိန်လမ်းမကြား )လမ်း၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်တ...
Apartment For Sale In Tamwe Township
ကျောက်မြောင်း မဂ္ဂင်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ် တွင် ပေ(900) အကျယ်ရှိ ကိုယ်ပိုင် ရေ၊မီး...
ရောင်းရန် - ကွန်ဒို - စမ်းချောင်း
ဦးဝိစာရလမ်းမ(နီး) စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော(2200) sqft အကျယ်ပါရှိcondoရောင်းမည်။ ...
Apartment For Sale In Thingangyun Township
16 ရပ်ကွက်၊ ဇဠိလ လမ်းသွယ် ၊သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ် တွင် ပေ (1026) အကျယ်ရှိသော ရေချ...
ရောင်းရန် - မြေကွက် ၊ ခြံ - မှော်ဘီ
Land For Sale In Hmawbi Township
ခြံ မျက်နှာဝ ပေ ၄၅ အရှည် ၈၀ အား ၆၈သိန်း ဖြင့်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပါမည်(အလျှော့အတင်းရှိသည်).ြ...
( ဦးဝိစာရ )လမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) &n...